Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb| uAirbnb®
Ukuba undwendwe lonakalisa indawo yakho okanye izinto zakho ngoxa luhleli kuyo luze lungakubhatali, unokukhuselwa ngokubhatalelwa umonakalo wendlu ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.
Isebenza ngokuzenzekelayo kubabuki zindwendwe emhlabeni wonke*
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb sinokukhusela oku:
Umonakalo kwindawo yakho obangelwe ziindwendwe
Umonakalo kwizinto zakho obangelwe ziindwendwe
Umonakalo obangelwe sisilwanyana esincedayo sondwendwe
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb asikukhuseli oku:
-Ukubiwa kwemali neziqinisekiso (Umz: iibhondi zokonga, izatifikethi zezabelo)
Umonakalo oqhelekileyo wendlu
Ukwenzakala okanye umonakalo wezinto zondwendwe okanye abanye abantu (unokukhuselwa Yi-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo
Unokufuna ukuba iindwendwe zakho ziqinisekise ukuba zingoobani ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukisha kwazo. Iindwendwe kusenokufuneka zinikezele ngenkcazelo yobuqu kuAirbnb, njengesazisi esisemthethweni, ukuze kuqinisekiswe.
Ukuba kukho into eyenzekileyo, ijelo lethu lemiyalezo elikhuselekileyo liyakuvumela uqhakamshelane neendwendwe nize nilungise iingxaki. Ukuba ingxaki ayikwazi ukulungiseka, Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo senzelwe ukukunceda.
Inkxaso efumaneka imini nobusuku
Ukuba kwenzeka into kuwe, indlu yakho okanye undwendwe, iqela lethu Labaxhasi Bentsapho ehlabathini lonke likhona ukuze likuncede.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo yenye yezinto ezandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine uAirbnb, kuba ndingathembela ngayo xa kukho iingxaki.”
UDennis, umbuki zindwendwe eLondon
Icebiso lokhuseleko: Hlola iiprofayile zeendwendwe
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngondwendwe ngaphambi kokwamkela isicelo salo sokubhukisha, jonga iinkcukacha zalo okanye ufunde izimvo zababuki ndwendwe ebebekhe balamkela. Ababuki zindwendwe neendwendwe banokufaka uluvo kuphela emva kokuphuma kondwendwe, ukuze wazi ukuba izimvo zisekelwe kukubhukisha kokwenyani.
Fumana amacebiso okhuseleko angakumbi
1. Qokelela ubungqina bomonakalo
Oku kusenokuquka iifoto, iividiyo, uqikelelo okanye iirisithi.
2. Qhakamshelana nondwendwe lwakho Kwiziko Lezemali
Cela ukubuyiselwa imali kwiintsuku eziyi-14 emva kokuphuma okanye ngaphambi kokungena kondwendwe olulandelayo, nokuba yeyiphi eyenzeka kuqala. Bamele baphendule isicelo sakho kwiiyure eziyi-72.
3. Buyiselwa imali okanye ucele uAirbnb angenelele
Ukuba undwendwe alufuni ukuyibhatala yonke imali, wena unokufanelekela ukubuyiselwa imali phantsi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo Sakwa-Airbnb. Ingcali yenkxaso iza kukunceda ngokukubonisa ukuba kwenziwa njani.
Yintoni Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo Sakwa-Airbnb?
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb se$1 000 000 sinokhubhatalela indawo ekhuselweyo xa kusenzeka into engaqhelekanga yomonakalo owenziwa lundwendwe ongaphezulu kunemali yedipozithi oluyikhuphileyo, okanye ukuba khange luyikhuphe idipozithi.
Inkqubo Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ayiyibhatali imali eziinkozo, izinto zexabiso eziqokelelweyo, imizobo enqabileyo, ijuwelari, izilwanyana zasekhaya okanye amatyala akho. Sicebisa ukuba ababuki zindwendwe bazikhusele okanye bazisuse izinto zabo zexabiso xa berentisa ngendlu yabo. Kwakhona le mali ayiwubhataleli umonakalo oqhelekileyo wendlu. Funda okungakumbi
Inkqubo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo inokubhatala iindleko ezinokuvela ukuya kufikelela kwi$1 000 000 sihlandlo ngasinye xa umntu efaka ibango lokwenzakala okanye lomonakalo ngoxa bekuhlelwe kwindlu ka-Airbnb.
Elo bango ligutyungelwa yi$1 000 000 kwindawo enendlu nganye ibe oko kusebenza phantsi kweemeko ezithile, kukho imilinganiselo neemeko engazibhatalelwayo. Funda okungakumbi
Yintoni umahluko phakathi kweSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb
kunye neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ziinkqubo ezimbini ezahlukeneyo zika-Airbnb zokunceda ababuki zindwendwe ngeendleko xa kukho umonakalo okanye ukwenzekala.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo: Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb senzelwe ukukhusela ababuki zindwendwe xa kusenzeka into engaqhelekanga yokonakalelwa yindlu, izinto okanye indawo yabo, isonakaliswa lundwendwe oluhlala kuloo ndawo. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo asiyiyo i-inshorensi ibe asithathi indawo yeinshorensi yomnikazi wendlu okanye eyomqeshi.
I-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo: Inkqubo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo yi-inshorensi, ibe yenzelwe ukukhusela ababuki zindwendwe xa umntu efaka ibango lokwenzakala okanye elomonakalo wendlu. Inkqubo yeInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo iyafumaneka kubabuki zindwendwe nokuba banazo ezinye ii-inshorensi kodwa iza kusebenza kuphela xa umonakalo wenzeke ngoxa kuhleliwe kwindlu yeAirbnb. Funda okungakumbi
Ndicela njani ukubuyiselwa imali phantsi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo?
Ngokuqhelekileyo ababuki zindwendwe kunye neendwendwe badla ngokuzicombulula iingxaki zabo Kwiziko Lezemali. Ukuba awukakwenzi oko, qala uqhakamshelane nondwendwe lwakho uze ulwazise ngesikhalazo sakho uze ufake isicelo sokubhatalwa Kwiziko Lezemali.
Ukuba awukwazi ukuyilungisa ingxaki nondwendwe: Okokuqala, ziqhelanise nemimiselo nemiqathango Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo. Qaphela ukuba izicelo kufuneka zifakwe kwiintsuku eziyi-14 emva kwexesha lokuphuma kondwendwe, okanye ngaphambi kwexesha lokungena kondwendwe olulandelayo, kuxhomekeka ukuba yeyiphi efika kuqala. Funda okungakumbi
I-inshorensi yomninikhaya isebenza njani noAirbnb?
I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ikhusela ababuki zindwendwe, ibe xa kufaneleka nabantu abaqeshe kubo indawo ibe isebenza phantsi kweemeko ezithile, kukho imilinganiselo neemeko engazibhataleliyo.
Ukuba unemibuzo ngendlela le polisi esebenza ngayo neinshorensi yomnikazi womzi okanye eyokurenta indawo, ufanele uncokole nenkampani yeinshorensi yakho. Ezinye iipolisi ziyabakhusela abanini bezindlu nabantu abarentayo kumabango asezinkundleni xa undwendwe lonzakele, kanti ezinye iipolisi azibakhuseli. Kusoloko kulicebo elihle ukwazisa abantu beinshorensi xa urentisa ngendlu yakho nangona ityala elibakho ngexesha lokuhlala kwa-Airbnb limele ligutyungelwe Yi-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo. Funda okungakumbi
Ngaba Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siyasebenza Kumakhaya Oncedo?
Ewe. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb esifikelela kwi-$1 000 000 sibhatala umbuki zindwendwe ukuba kuye kwenzeka into engaqhelekanga yokuba undwendwe lonakalise indawo ekhuselweyo xa umonakalo ungaphezulu kwedipozithi ebikhutshiwe, okanye ukuba khange ikhutshwe idipozithi. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sisebenza kwiindawo zokuhlala ezibhukishwe kuAirbnb, kuquka iindawo zokuhlala Zamakhaya Oncedo. Funda okungakumbi